:Bọchị: Nọvemba 18, 2019
Eskisehir Concrete Road na Ihe Nlereanya Nwere ka Turkey; Obodo Eskişehir Metropolitan, nke bụ ihe atụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ọkachasị ya na arụmọrụ okporo ụzọ ya arụpụtara n'ime ime obodo, 13-14 2019 ahaziri na Ankara n'etiti November 1. [More ...]
Ọzụzụ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala Kocaeli bidoro; A ga-enye Ngalaba Transportgbọ njem na Njikwa okporo ụzọ Kocaeli na mpaghara ọhaneze na-elekọta ationgbọ njem Park Inc. 581 ọkwọ ụgbọala na-eje ozi 'Ọkwọ ụgbọ ala Ọha Ọha'. [More ...]
TCDD 2 Ijeri 558 Nde LL The Republic of Turkey State Railways (TCDD) toro losses. Ijeri 2 nke 558 nke State Railways, nke mmefu ego ya abụrụwo oghere ojii ruo ọtụtụ afọ [More ...]
387 Bosnia na Herzegovina
Yagbọ oloko Konya na-ebu Bosnians; Mszọ ụgbọ oloko mbụ emere na Konya na 1992 na trams ndị a na-ebute site na Germany zigara Bosnia na isi obodo Herzegovina na Sarajevo na mkpebi e mere n'oge oge Tahir Akyürek. Agụmakwụkwọ nke ụmụ amaala na Konya [More ...]
Tragbọ Okporo -gba Ọsọ Na-adịghị Ewuwu
Dabere na akwụkwọ nnọchiteanya CHP, ọ dịghị ihe mmụta a napụrụ site na ọdachi ahụ. Onye nnọchi anya CHP Ankara Murat Emir kwuru na enweghị akara ngosi elektrọnik nke kpatara ihe mberede ụgbọ oloko ahụ gburu ndị 9 na Ankara afọ gara aga, Başkentray [More ...]
Workslọ Ọrụ gbọ njem na Ankara
Workslọ Ọrụ gbọ njem na Ankara; 20, nke Ankara Obodo ukwu na-akwado, ga-eme na ogbako ụgbọ ala a ga-eme na Wednesde na Nọvemba na ntinye aka nke Ankara Mayor Mansur Yavaş. [More ...]
Onye isi ala Yılmaz jidere nkwa ya nke 200 S Plate Ga-Ebu Nri Site na Obi; Onye isi obodo Balikesir Yucel Yilmaz, kwere nkwa ịdebe ndị na-azụ ahịa nkwa votu. Balıkesir Obodo Ime Obodo, na mkpokọta n'ógbè ahụ dum [More ...]
A ga-anata ọrụ mgbazinye ụgbọala Ozi teknụzụ Nzuzo Ozi Mmezi na Mmezi Purzụta Ọrụ Nchebe Onwe Onye (TÜLOMSAŞ)
Passgabiga na Kocaeli sịrị 'Ee e megide Ime Ihe ike megide ụmụ nwanyị'; Kocaeli Obodo ukwu, 15-30 N'etiti November 2019, Dr. Sadık Ahmet na Bülent Ecevit gosipụtara ngabiga a na-egosi dị ka agba nke ime ihe ike megide ụmụ nwanyị n'ụwa. [More ...]
Ndi IMM 'Smart City Workshop' mere ya; N Smart City Nnọkọ ihe nhazi nke Istanbul Metropolitan Municipal (IMM) haziri aha ya bụ Directorate na Ngalaba Kọmputa [More ...]
Onye isi obodo Ankara Metropolitan EGO General Directorate mere ka a mara na nrụzigharị ndị nrụrụ aka na-emebi emebi na ọdụ ụgbọ obodo a ga-agwụ ngwa ngwa o kwere omume. Nkwupụta X XXX na October 14 na ndi na-ebupughi ndi n’adighi oru n’ime ugbo ala; Karazọ ụgbọ Ankara, [More ...]
EGO iji nata 10 Nwanyị Ọkwọ ụgbọ ala maka Publicgbọ njem Ọha; Onye isi obodo Ankara Metropolitan EGO General Directorate mepere ule iji nwude ndị ọrụ ụgbọ ala nwanyị 10 na ụgbọ ala ọha. Ikwuwa okwu banyere EGO [More ...]
Nnukwu nnweta ụmụ akwụkwọ na Ankara; Mansur Yavaş, onye isi obodo nke Ankara Obodo ukwu, na-aga n'ihu na-emejuputa ngwa ndị na-eme ka ụmụ akwụkwọ nọ n'isi obodo dịkwuo mfe. Emere ya nke mbu na Ankara na iwu Onye isi ala Yavaş na oge afọ dị [More ...]
Obodo Ankara Obodo Anọ Çubuk Ndụ Ezinaụlọ, 81. N'ime ogo ihe ncheta ahụ, ọ haziri ihe omume Tan Meetma Nzute na Tandem Bicycles, nke a maara dị ka igwe mmadụ abụọ na Çubuk. Inggba ịnyịnya na-agba agba na ụkwụ na-atọ [More ...]